The Ugly Twin - kim_se_in - Wattpad
87.1K Reads 10K Votes 25 Part Story
By kim_se_in Ongoing - Updated Mar 14
"ရူးပါ့ကွာ!!! မင်း ချစ်ခွင့်ပန်လိုက်တာ သူမဟုတ်ဖူးကွ...သူ့အမွှာ"
ရုပ်ချင်းခွဲမရလောက်အောင် တူတဲ့ အမွှာညီအစ်ကိုပေမယ့်ို့၂ယောက်လုံးရဲ့ ဘဝတွေက တောင်နဲ့ မြောက်လိုပဲ ဝင်ရိုးစွန်းတစ်ခုပေါ်မှာ အတူရှိနေပေမယ့် လုံးဝ ဆန့်ကျင်ဘက်။
-Jongin အတွက်​ သူ့မူပိုင်ရယ်လို့ ဘာမှ မရှိတဲ့အချိန်မှာ Taemin က​တော့  အရာရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသား..~~ Jongin မှာ မရှိတဲ့ အရာရာတိုင်း... *သူငယ်ချင်း...ကျော်ကြားမှု... ထင်ပေါ်မှု... အလေးထားခံရမှု... နောက်ဆုံး အချစ်နဲ့ ပတ်သက်တာက အစ *...အားလုံးဟာ Taemin ဘက်မှာပဲ ရှိနေခဲ့တယ်။
-တစိနေ့မှာ Junior dancer Kim Taemin ကို သဘောကျမိသွားတဲ့ Oh Sehun က Taemin အစား
Kim Jongin ကို မှားပြီး ချစ်ခွင့်ပန်မိသောအခါ ~~~
-Jongin  ကိုယ်တိုင်ကလဲ Oh sehun ရဲ့ ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းကို သဘောတူ လက်ခံလိုက်​​ချိန်​မှာ​တော့  ~~~
- လုံးဝမတူညီ၊ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို မှားပီးချစ်​ခွင့်​ပန်​
my_love_nini Aug 13, 2017
SileSile0 May 30, 2016
Bernal_XianB Mar 18, 2016
author nim plz ! original fanfics ကို ဖတ်မို့ ရှာမတွေ့ဘူးရယ် wp မှာမဟုတ်ဘူးလားဗျ author ရဲ့ reading list ထဲထည့်လို့ ရ ရင် ထည့်ပေးပါလား ဗျ plz
Get notified when The Ugly Twin is updated
43.8K 5.1K 535
33.3K 1.5K 635
24.7K 3.2K 1.7K